ပြင်သစ်နိုင်ငံက အီဖယ်မျှော်စင်ကြီးရှေ့မှာ ချစ်သူရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာ ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ့်ချစ် – GuGuGarGar
ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ အဆိုတော်မလေး အိမ့်ချစ် က သူမချစ်သူရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံမှု ကို မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဂီတလောက မှာ အိမ့်ချစ်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံးဖြစ်လာဖို့ ငယ်စဉ်တည်းက ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်အကြောင်း ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါနော်။ အိမ့်ချစ်ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူ ချစ်ကောင်းရဲ့ သမီးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး ကြိုးစားရတာကို နှစ်သက်သူတစ်ဦးပါ။
ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး မိဘအပေါ်မှာလည်း သိတတ်လွန်းတဲ့ အိမ့်ချစ်က မိသားစုတစ်ခုလုံး အတွက် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ အပျိုကြီးဘဝနဲ့ ရပ်တည်လာတဲ့ အိမ့်ချစ်ကတော့ မကြာခင်အချိန်မှာပဲ အပျိုကြီးဘဝကို စွန့်လွှတ်တော့မှာပါ။ သူမက ချစ်သူရဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ Propose ကို ကြုံတွေ့ခံစားလိုက်ရပါပြီ။
“မထင်မှတ်ထား တဲ့ အချိန်မှာ Propose လုပ်တဲ့သူ အချစ်တွေပေးတဲ့သူ အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာတွေပေးသူ လုံခြုံနွေးထွေးမှုတွေပေးသူ အဖေလိုအကိုလိုစောင့်ရှောက်ပေးသူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးသူ သူနဲ့တူတူဘဝတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမို့ I said YES..!!!” လို့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရေးသားလာတာပါ။
I said Yes လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်တစ်ယောက် သူချစ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဘဝတစ်သက်တာလုံး ပျော်ရွှင်စွာလက်တွဲသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Cele Star
ပရိတျသတျတှေ ခဈြကွတဲ့ အဆိုတျောမလေး အိမျ့ခဈြ က သူမခဈြသူရဲ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခံမှု ကို မထငျမှတျထားတဲ့ အခြိနျမှာ ကွုံတှလေို့ကျရပါတယျ။ ဂီတလောက မှာ အိမျ့ခဈြဆိုတဲ့ နာမညျတဈလုံးဖွဈလာဖို့ ငယျစဉျတညျးက ကွိုးစားလာခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြအကွောငျး ပရိသတျတှေ သိကွမှာပါနျော။ အိမျ့ခဈြဟာ ဖခငျဖွဈသူ ခဈြကောငျးရဲ့ သမီးဖွဈပမေယျ့ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျပွီး ကွိုးစားရတာကို နှဈသကျသူတဈဦးပါ။
ဘာသာတရား ကိုငျးရှိုငျးပွီး မိဘအပျေါမှာလညျး သိတတျလှနျးတဲ့ အိမျ့ခဈြက မိသားစုတဈခုလုံး အတှကျ အပွညျ့အဝ တာဝနျယူထားနိုငျသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ယနအေ့ခြိနျထိ အပြိုကွီးဘဝနဲ့ ရပျတညျလာတဲ့ အိမျ့ခဈြကတော့ မကွာခငျအခြိနျမှာပဲ အပြိုကွီးဘဝကို စှနျ့လှတျတော့မှာပါ။ သူမက ခဈြသူရဲ့ မထငျမှတျထားတဲ့ Propose ကို ကွုံတှခေံ့စားလိုကျရပါပွီ။
“မထငျမှတျထား တဲ့ အခြိနျမှာ Propose လုပျတဲ့သူ အခဈြတှပေေးတဲ့သူ အေးခမျြးတဲ့မတ်ေတာတှပေေးသူ လုံခွုံနှေးထှေးမှုတှပေေးသူ အဖလေိုအကိုလိုစောငျ့ရှောကျပေးသူ သူငယျခငျြးတဈယောကျလို ပြျောရှငျမှုတှပေေးသူ သူနဲ့တူတူဘဝတဈခု ထူထောငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီမို့ I said YES..!!!” လို့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ ဖဘေု့တျအကောငျ့ကနေ ပြျောရှငျဖှယျရေးသားလာတာပါ။ I said Yes လို့ ပွောလိုကျတဲ့ အိမျ့ခဈြတဈယောကျ သူခဈြတဲ့ ခဈြသူနဲ့ ဘဝတဈသကျတာလုံး ပြျောရှငျစှာလကျတှဲသှားနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ Cele Star
တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး မင်္ဂလာပန်းကြဲနေတဲ့ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ချစ်မဝတွေဖြစ်နေကြတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ Video လေး